राष्ट्रबादी हुँ भन्नेले, भारतले नेपाली भू–भागमा बाटो खनेर त्यसको उदघाटन गरिसक्दा के हेरेर बसे ?ः नेता रावल – Etajakhabar
रुपनी जि.एम, काठमाण्डौ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस फैलिएसंगैनेपाल पनि अछुता रहेन । कोरोनाका कारण अहिले मुलुक ४५ औ दिनदेखि लकडाउनमा रहेको छ । नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको चर्चा हुने गर्दछ । तर पछिल्लो पटक कोरोनाको चर्चालाई नेकपा भित्रको राजनीतिकले छायाँमा पारेको छ ।
विशेषगरी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले कोरोनालाई ओझेल पार्दै आएको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको नयाँ गुट बन्यो । पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रतिनिधी सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो । कहिले प्रधानमन्त्रीले आफूले राजीनामा दिएर नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मका अभिव्यक्ति सचिवालय बैठकमा गरे ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत माग गरे । ओलीले न पार्टी राम्रो संग संचालन गर्न सके न सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै नेपाल पक्षकाले उनका राजीनामा मागका कुरा बढी उठाएका थिए । त्यस्तो माग उठाउनेमा नेपाल पक्षका नेतामध्य एक हुन भिम रावल । उनी ओलीको कार्यशैलीप्रति खुलेरै आलोचना गर्दछन । जबजब ओलीले देश र जनताको अहीतमा गएर पार्टीको विधान र संविधानको मर्म विपरित कार्य गर्ने गरेका छन् तबतब नेता रावलले ओलीको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि नेपाली राजनीतिमा रावललाई ओलीको कटु आलोचकका रुपमा चिन्ने गरिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विधान अनुसार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरे । नेकपाका उनै प्रभावशाली नेता भीम रावलसंग गरिएको कुराकानी
यदि कसैले प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेरै विरोध गर्ने हिम्मत राख्छ भने त्यो तपाँई नै हो । नेपाली राजनीतिमा नेकपाले मच्चाएको उथुपुथलको सन्दर्भमा के तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन सक्नुहुन्छ ? त्यो हिम्मत छ तपाँईमा ?
पहिलो कुरा त म प्रधानमन्त्रीको आलोचक होईन । म उहाँको गलत क्रियाकलापको आलोचक हुँ । र उहाँबाट हुने जुन राष्ट्रघाती कृयाकलाप हुन्छ । त्यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रमा आघात पुग्ने हुन्छ । र जनताको हित रक्षाको लागि मैले जहाँ कमीकम्जोरी देख्छु त्यस विषयमा आवाज उठाएर उहाँलाई नै सहयोग पु¥याएको मात्र हो । अब यसमा मलाई म प्रधानमन्त्रीको आलोचक हुँ होईन त्यो जनताले भन्नेछन् । एकाध व्यक्तिले मेरो बारेमा गरेको टिकाटिप्पणीको पछि लाग्ने मान्छे म होईन । र रह्यो कुरा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा । उहाँ त्यस्तो को हो र उहाँको राजीनामा माग्नै नहुने ? यदि देश र जनताको पक्षमा कसैले पनि कुनै गलत कदम उठाउँछ भने त्यसको राजीनामा मात्रै हैन कारवाही हुनुपर्छ भनेर म माग गर्छु ।
चित्त नबुझेको कुरामा आवाज उठाउनु भनेको सानो तिनो हिम्मतले हुने कुरा होईन । तर तपाँई त आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीकै विरोध गरिरहनु हुन्छ । उहाँकै मात्र आलोचना गरिरहनु हुन्छ नि, किन ?
विरोध गर्नैपर्ने काम पनि त उहाँले नै गर्नु भएको छ नि । उहाँ बाहेक अरु कोबाट भएको छ त ? मलाई बताउनुस् त । देश यस्तो महामारीबाट गुज्री रहेको बेला उहाँलाई पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउन अधिकार पार्टीमा नै छलफल नगरि कसले दियो ? यस्तो लकडाउनको बेलामा कुर्सिको भाग बन्डा गर्न, म नै पार्टीको सर्वेसर्वा हुँ, मैले जे बोल्यो त्यही मात्र लागु हुन्छ भन्ने मानसिकता उहाँमा छ । यसका लागि त प्रधानमन्त्री बनाईएको होईन नि ? अनि किन विरोध नगर्ने ? मेरो मानसिकता र विचारधारा ३१÷३२ वर्षअघि राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको स्वाधिनता, जनताको अधिकारकोलागी जस्तो थियो आज पनि उस्तै नै छ । यो न कहिल्यै परिवर्तन भयो र हुने छ । म कुनै पनि व्यक्तिले यदि यो देशको लागि राम्रो काम गर्छ । त्यसको पक्षमा बोल्ने गर्दछु । जनताको हक अधिकारकोलागी यदि कसैबाट राम्रो काम हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट नेपालको संविधानको प्रतिरक्षाको लागि राम्रो काम हुन्छ । बाह्य हस्तक्षेपको कुनै पनि रुपहरुलाई ठाडै अस्वीकार यदि कसैले गर्छ भने म त्यस्तो व्यक्तिको खुलेरै प्रसंशा गदर्छु । तर कुनै पनि व्यक्तिले त्यसको विपरीत क्रियाकलाप ग¥यो भने म यस्तो स्वाधिन नेपालको नागरिक हो । त्यही नागरिकको हैसियतले म त्यसको कटु आलोचना गर्न पछि पर्दिन । सधै खण्डन गरिरहन्छु । चाहे त्यो देशको प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् । र मलाई यसो गर्नबाट रोक्न सक्ने कसैमा दम्भ छैन ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको कन्ट्रोभर्सि भनेको अध्यादेश हो, त्यो त उहाँले फिर्ता लिई सक्नु भयो नि । अध्यादेश फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा पनि तपाँई किन असन्तुष्टि ?
त्यो कुरा त उहाँले बैठकमा भन्नु प¥यो नि । किन त्यो उहाँले ल्याउनु भयो ? त्यो आशय खुलाउनु पर्छ कि पदैन ? नेपाली जनताले थाहा पाउने गरि स्पटिकरण दिनु पर्छ कि पर्दैन ? पार्टीको उच्च तहमा नेपालको संविधान निमार्ण गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि जुन मूलभुत उद्येश्यका साथ हामीले जुन कानून ल्याएको थियौं त्यो कानूनलाई देशको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा किन बदल्नु प¥यो ? त्यो जान्ने अधिकार पार्टीलाई हुँदैन ? नेपाली जनतालाई हुँदैन ? म लगायत नेपाली जनताले खोजेको त्यही कारण हो । त्यसको आशय दिनुस् । बैठक बोलाउनु्स् भनेर पार्टीको बिधान बमोजिम ४५ जना स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये २०÷२० जनाले माग गर्दा पनि बैठक नै नबोलाउने । यो निरकुंशतन्त्र होईन । यो लोकतन्त्र हो । र लोकतन्त्रमा कानूनी शासन विधि, विधान र प्रावधानबाट चल्छ । यो कुराको हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्न बिर्सनु भएको छ । त्यसैले म लगायत अन्य नेताहरुले उहाँलाई सम्झाएका हौं । हामीले त उहाँकै लोकप्रियताका लागि बोलेका हौं । उहाँलाई बाटो देखाएका हौं । उल्टै हामीलाई दोष लगाउने ?
यदि प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु भएन भने तपाई लगायत २० जना सदस्यको रणनीति कस्तो हुन्छ ?
पहिलो कुरा आफैले बनाएको विधान । आफैले हिजो स्वीकार गरेको मन्यतालाई मिचेर पार्टी विधान अनुसार माग गरिएको बैठक बोलाउनै हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु हुन्छ र त्यही अडानमा रहनु हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । यदि उहाँले विधान, कानून, आफैले बनाएका सिद्धान्त, नीति, जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई कुल्चदै हिंड्नु हुन्छ भने त्यस्को प्रतिबाद हुन्छ । त्यहाँ भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन । उहाँले सोंचे जति सजिलो छैन बैठकबाट उम्किएर भाग्न । यदि भाग्दै भाग्दै बैठक टार्ने मनसायमा उहाँ हुनुहुन्छ भने त्यसले उहाँलाई दुर्दसाततिर लैजान्छ । र त्यसको ठूलो मूल्य उहाँले चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र उहाँ निकटका मन्त्रीहरुले प्रष्ट रुपमा भनेका छन् बजेट र नीतिको कार्यक्रम अगाडि बैठक बोलाउन सकिंदैन भनेर । के भन्नु हुन्छ ?
उहाँका निकट व्यक्तिहरुको त कुरै नगर्नुस् । उहाँहरुको भनाईको कुनै अर्थ छैन । समृद्ध नेपालका लागि त झन बिल्कुलै छैन । उहाँका निकट व्यक्तिहरुको भनाईको पछि नजाउँ । यदि ती निकट भनिनेहरु गतिलो राख्नु हुन्थ्यो भने आज उहाँ यो धरातलमा फस्नु हुने थिएन । यो कुराको मुल्याङ्कन प्रधानमन्त्री स्वयमले गर्नु पर्ने हो । तर दुःखको कुरा । उहाँले नगरेको हुनाले नै उहाँलाई खबरदारी गर्न हामी बाध्य भएका हौं । उहाँले पार्टीको विधानको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसको मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ । त्यो उहाँको कर्तव्य हो । यदि यसो गर्नु भएन भने पार्टी छ । हामीले कानून भन्दामाथि हुने प्रणाली उहिल्यै फालिसक्यौं । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै व्यक्तिले कानून भन्दा माथि हुने परिकल्पना नगरेपनि हुन्छ । उहाँ त झन् पार्टी अध्यक्ष आफै र प्रधानमन्त्री पनि आफै । यदि उहाँले कानून मिचेरै भएपनि अगाडि बढ्ने चाहना राख्नु हुन्छ भने त्यो उहाँका दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । र त्यस दिवा स्वप्नबाट जति चाँडो ब्युँझिन सक्यो त्यति नै उहाँको लागि राम्रो ।
‘मैले विकास र सम्बृद्धिको काम गरेको छु, भ्रष्टचार अन्त्य गर्ने काम मैले नै गरको छु । यति राम्रो काम गर्दापनि सरकारलाई पार्टीकै नेताहरुबाट असहयोग भएको छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ । किन तपाँईहरुले सरकारको कामको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याँई गर्नु हुन्छ ?
ए ! उसो भा भ्रष्टचार कमिसन रेर्कड खुलेआम हुँदा पनि भ्रष्टचार भएकै छैन भनेर माउले चलल्ला छोपे झैं छोपेर तिनै भ्रष्टचारीलाइ राखेको उहाँले नै हैन ? किन राखिराख्नु भएको छ ? स्वास्थ्यमा उपकरण भएन भनेर चिकित्सकहरु व्यक्तिग सुरक्षा उपकरणको माग गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । सबै प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सामाग्री पुग्नै नसकिरहेको अवस्थामा तिनै स्वास्थ्य सामाग्रीहरुमा नै भ्रष्टाचार भएको छ । अनि त्यो कुराको हामीले ढोल पिटेर प्रशंसा गरिदिनु पर्ने ? प्रशंसा गरेन भनेर हामीलाई सहयोग गरेनन् भन्ने ? भ्रष्टचार गर्नै दिन्न भन्नेले त ओम्नि लगाएतका कम्पनीहरुमा कति प्रतिशतको कमिसन भ्रष्टचारमा कोको मुछिउका छन् ? तिनलाई कार्वाही भएको जनताले देख्न पाउनु प¥यो नि । राष्ट्रियताको कुरा उठाउनु भयो तपाँईले । म तपाँईलाई भर्खरै भएको घटनामा लैजान चाहान्छु । आज मात्रै मैले समाचार सुनें कालापानी क्षेत्रबाट नेपालको भूभाग हुँदै भारतले धमाधम बाटो बनाएर चीनसम्म पु¥यायो । भारतको रक्षामन्त्रीले आज उदघाटन गरे भन्ने मैले सुनें । खै त राष्ट्रियताको म सबैभन्दा ठुलो रक्षक हुँ भन्ने व्यक्तिबाट त्यसको प्रतिबाद भएको ? यो समाचार त उहाँले पनि सुन्नु भयो होला । खै त आज दिन भरिमा केही आयो सरकारको तर्फबाट प्रतिकृया ? कुरा मात्र गरेर हुँदैन नतिजा काममा देखिनु प¥यो ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकमा आफू बिरुद्ध गुटगट भेला राखेको भन्दै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल दुवैसंग आक्रोश पोख्नु भएको थियो नि ? यो विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको यस्ता गुनासोप्रति मलाई बोल्न मन त पटक्कै थिएन । तर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ । त्यसैले ईच्छा नभएपनि बोल्न बाध्य भएको छु । म लगायत आम नेपाली जनताको प्रश्न छ । देशैभरी फाउण्डेशन गठन गरी गुटबन्दी किन श्रृजना गर्ने उहाँ नै होईन ? किन त्यसो गरेको त उहाँले ? देशको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले बालुवाटारमा सांसदको भेला गरेर पार्टीको सिद्धान्त विपरीतको काम गर्ने उहाँ नै होईन ? त्यो काम पनि उहाँले किन शुरु गरेको ? हामीले कतै भेला गरेका छौं ? त्यति मात्रै हैन कतिपय सांसदलाई ज्यान मार्ने ध’म्कि किन दिनु भएको उहाँले ? एउटै सांसदलाई मन्त्री लगायत सात सात जनाले आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर भनेर अभियान चाहीँ किन चलाएको त प्रधानमन्त्रीले ? आफुले चाहीँ त्यस्तो अभियान चलाउने । अनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट यो काम त गलत भयो त भनेर पार्टीका अरु नेताहरुले छलफल गर्दा किन मेरा बिरुद्धमा गुटबन्दि गरेको भनेर झपार्ने ? यस्तो तर्कको कुनै पनि औचित्य छैन । र यस्ता खालका हास्यास्पद तर्कहरु स्थापित हुनै सक्दैनन् ।
तपाँईकै पार्टीका नेताहरुले केपी शर्मा ओली बिनाको कल्पना नै गर्न सकिदैन भन्ने तर्क गर्छन् नी । तपाँईलाई के लाग्छ ?
मलाई यो यस्ता तर्कहरु सुनेपछि हाँसो मात्रै लाग्छ । त्यसो भए कुनै व्यक्ति यो संसारमा रहेन भने ऊ रहेको पार्टी अथवा देश केही पनि रहँदैन ? यस्ता खालका हास्यास्पद तर्कहरुलाई हाम्रो माक्र्सबादी सिद्धान्तमा अधिभूतबादी दृष्टिकोण भन्छौं हामी । तपाँईको यो प्रश्नमा मलाई यो भन्दा धेरै लामो अरु केही भन्नु नै छैन ।
Posted on: Sunday, May 10, 2020 Time: 9:56:46
-20045 second ago
-18776 second ago
-17237 second ago
-15616 second ago
-14929 second ago
-14420 second ago
-13476 second ago
-12046 second ago